Kedu ka UTM Parameters na Email si arụ ọrụ na mkpọsa Google Analytics? | Martech Zone
Anyị na-eme ntakịrị mkpagharị na mmejuputa ọrụ nke ndị na-enye ọrụ email maka ndị ahịa anyị. Ọ bụ ezie na anaghị akọwakarị ya na nkwupụta ọrụ, otu atụmatụ anyị na-ebuga mgbe niile bụ ịhụ na ozi email ọ bụla bụ. akara UTM na-akpaghị aka ka ụlọ ọrụ wee hụ mmetụta nke ahịa email na nzikọrịta ozi na okporo ụzọ saịtị ha niile. Ọ bụ nkọwa dị mkpa nke a na-elegharakarị anya… mana ekwesịghị ịbụ.
Kedu ihe bụ UTM Parameters?
UTM guzo maka Urchin Ndepụta Module. Ihe UTM (nke a na-akpọkarị koodu UTM) bụ snippet nke data n'ime aha/uru uru nke enwere ike itinye na njedebe URL iji soro ozi gbasara ndị ọbịa na-abata na webụsaịtị gị n'ime Google Analytics. Aha ụlọ ọrụ mbụ na ikpo okwu maka nyocha bụ Urchin, yabụ aha ahụ rapaara.
Emebere nleba anya mkpọsa iji weghara mgbasa ozi na okporo ụzọ ntụaka ndị ọzọ site na mkpọsa akwụ ụgwọ na weebụsaịtị. Otú ọ dị, ka oge na-aga, ngwá ọrụ ahụ bara uru maka ịzụ ahịa email na mgbasa ozi mgbasa ozi. N'ezie, ọtụtụ ụlọ ọrụ ugbu a na-ebuga nsuso mkpọsa n'ime saịtị ha iji tụọ arụmọrụ ọdịnaya yana oku na-eme ihe! Anyị na-akwadokarị ndị ahịa ka ha tinye paramita UTM na mpaghara ndebanye aha zoro ezo, kwa, ka njikwa mmekọrịta ndị ahịa ha (CRM) nwere data isi mmalite maka ụzọ ọhụrụ ma ọ bụ kọntaktị.
The Ntọala UTM bụ:
utm_mgbasa ozi (Chọrọ)
UTM Parameters bụ akụkụ nke eriri ajụjụ agbakwunyere na adreesị webụ ebe aga (URL). Ọmụmaatụ nke URL nwere UTM Parameters bụ nke a:
Yabụ, nke a bụ ka URL a kapịrị ọnụ si agbarie:
Querystring (ihe niile na-esote?):
utm_campaign= mkpọsa m%20
Aha/Uru Mmakọ na-akụda dị ka ndị a
Ngbanwe ọnụọgụ ajụjụ bụ Ederede URL n'ihi na oghere anaghị arụ ọrụ nke ọma n'ụfọdụ oge. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, %20 dị na uru bụ n'ezie oghere. Ya mere, ezigbo data weghaara n'ime Google Analytics bụ:
Mgbasa Ozi: Mgbasa ozi m
Isi Iyi: Onye na-eweta ọrụ email m
Oge: Zụta ugbu a
Mgbe ị na-eme ka nsuso njikọ akpaghị aka na ọtụtụ nyiwe ahịa email, mkpọsa ahụ na-abụkarị aha mgbasa ozi ị na-eji hazie mkpọsa ahụ, isi mmalite na-abụkarị onye na-eweta ọrụ email, a na-etinye usoro na email, yana okwu na ọdịnaya. A na-ahazi ya na ọkwa njikọ (ọ bụrụ na ọ bụla). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịgaghị eme ihe ọ bụla iji hazie ihe ndị a na ikpo okwu ọrụ email yana nsochi UTM na-akpaghị aka.
Kedu ka UTM Parameters si arụ ọrụ n'ezie na ahịa email?
Ka anyị mee akụkọ onye ọrụ wee kparịta ka nke a ga-esi arụ ọrụ.
Ụlọ ọrụ gị na-ebute mgbasa ozi email yana Njikọ Track na-akpaghị aka.
Onye na-ahụ maka ọrụ email na-etinye parampat UTM na akpaghị aka na eriri ajụjụ maka njikọ ọpụpụ ọ bụla na ozi-e.
Onye na-ahụ maka ọrụ email na-emelite njikọ ọpụpụ ọ bụla site na iji njikọ nsochi pịa ga-ebuga URL ebe a na-aga yana eriri ajụjụ nwere oke UTM. Nke a bụ ya mere, ọ bụrụ na ị na-elele njikọ dị n'ime ahụ nke ozi-e zitere… ị na-adịghị ahụ ebe URL n'ezie.
IHE: Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ịhụ ka esi atụgharị URL, ị nwere ike iji URL redirect tester dị ka Ebe na-aga.
Onye debanyere aha na-emepe ozi-e na pikselụ nsochi na-ejide emume mepere emepe email. IHE: Ụfọdụ ngwa email amalitela igbochi mmemme mepere emepe.
Onye debanyere aha pịa njikọ ahụ.
A na-ejide mmemme njikọ ahụ dị ka ọpịpị site n'aka onye na-ahụ maka ọrụ email wee bugharịa ya na URL ebe a na-etinye ya na parampat UTM.
Onye debanyere aha na-agbada na webụsaịtị nke ụlọ ọrụ gị yana edemede Google Analytics na-agba ọsọ na ibe ahụ na-ewepụta paramita UTM na-akpaghị aka maka nnọkọ onye debanyere aha, na-eziga ya ozugbo na Google Analytics site na pikselụ nsuso ike ebe ezigara data niile, wee chekwaa data dị mkpa. n'ime kuki na ihe nchọgharị onye debanyere aha maka nloghachi na-esote.
A na-akwakọba data ahụ ma chekwaa ya na Google Analytics ka e wee nwee ike ịkọ ya na Ngalaba Mgbasa Ozi nke nchịkọta Google. Gaa na Nnweta> Mgbasa Ozi> Mgbasa ozi niile ka ịhụ mkpọsa gị nke ọ bụla wee kọọ mgbasa ozi, isi mmalite, ọkara, okwu na ọdịnaya.
Nke a bụ eserese nke otu esi enweta akara UTM na ijide njikọ email na Google Analytics
Kedu ihe m ga-eme na nchịkọta Google iji weghara UTM Parameters?
Ozi ọma, ịgaghị eme ka ihe ọ bụla dị na Google Anatyics weghara UTM Parameters. A na-enyere ya aka ozugbo etinyere mkpado Google Analytics na saịtị gị!
Kedu otu m ga-esi kọọ akụkọ gbasara ntụgharị na mmemme ndị ọzọ site na iji data mkpọsa?
A na-etinye data a na-akpaghị aka na nnọkọ ahụ, yabụ ọrụ ọ bụla onye debanyere aha na-eme na webụsaịtị gị ka ejiri paramita UTM rutere ebe ahụ metụtara. Ị nwere ike tụọ ntughari, omume, mgbaba onye ọrụ, ihe mgbaru ọsọ, ma ọ bụ akụkọ ọ bụla ọzọ wee were paramita UTM email gị nyochaa ya!
Enwere ụzọ isi weghara onye debanyere aha nọ na saịtị m?
Ọ ga-ekwe omume ijikọ mgbanwe ọnụọgụ ajụjụ ndị ọzọ na mpụga nke UTM ebe ị nwere ike weghara ID onye debanyere aha ya ka ọ kwanye wee dọpụta ọrụ weebụ ha n'etiti sistemụ. Yabụ… ee, ọ ga-ekwe omume mana ọ chọrọ obere ọrụ. Nhọrọ ọzọ bụ itinye ego na ya Nchịkọta Google 360, nke na-enyere gị aka itinye ihe nchọpụta pụrụ iche na onye ọbịa ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-agba Salesforce, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike itinye ID Salesforce na mkpọsa ọ bụla wee mee ka ọrụ ahụ laghachi azụ na Salesforce!
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na itinye usoro dị ka nke a ma ọ bụ chọọ enyemaka na UTM Tracking na onye na-eweta ọrụ email gị ma ọ bụ na-achọ itinye ọrụ ahụ na sistemụ ọzọ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ m… Highbridge.
Tags: mkpọsaọdịnaya mkpọsamgbasa ozi mgbasa oziaha mkpọsaisi iyi mkpọsaokwu mkpọsaemail mkpọsaemail Marketingndị na-enye ọrụ emailGoogle Analyticsgoogle analytics mkpọsa nsusogoogle analytics mkpọsa nsuso urlajụsoro njikọ emailegwu njikọusoro utmutm nsochiutm_mgbasa oziutm_contentutm_mediumutm_sourceutm_term